China Blank Drop Beer Sleeve Unisex T Shirt Yako Peke Dhinda vagadziri uye vanotengesa | RE-HUO
Blank Kudonha Pfudzi Sleeve Unisex T Shirt Yako Iwe Dhinda
Chigadzirwa Chigadzirwa: Donhedza T-shirt
Ruvara: Dema / chena & tsvuku / chena & bhuruu / mwenje wepepuru / tsvuku / yero / girini / bhuruu
Saizi: S / M / L / XL / 2XL / 3XL
Zvemastock colours, yedu MOQ ndeye makumi mashanu ezvimedu t-shirt mune yega yega, uye unogona kusarudza akawanda masize.
Iyi ndiyo saizi chati yeiri muchitoro, isu tinopawo yakasarudzika saizi masevhisi, iwe unogona kutitumira yako saizi chati kana kutitumira pahembe, mugadziri wedu anozozvigadzirisa zvinoenderana nezvaunoda.
Iwe unotumira dhizaini yako kwatiri uye isu tichaiprinta zvinoenderana nechikumbiro chako, Kana iwe usinga zive kugadzira pahembe dhizaini, unogona kutitumira logo yako kana zano, uye mugadziri wedu anogona kupedzisa dhizaini yako.
Isu tinopa yakagadziriswa chitaridzi uye tag tag, kugadzira t-shirt neyako brand.
Pashure: Cotton pachena kuvaka muviri tsika kusimba vest mutambo tangi yepamusoro yevarume
Zvadaro: kuoneka chengetedzo vesti yekuratidzira mitsetse inoshanda kupfeka
Wholesale Vakadzi Fashoni Yakasarudzika Logo Shinda Shirt ...
kuoneka chengetedzo chengeto vesti inoratidza stri ...